Hidhattoonni Taalibaan Paakistaan keessatti namoota 145 ajjeesan;132 barattoota - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Hidhattoonni Taalibaan Paakistaan keessatti namoota 145 ajjeesan;132 barattoota
Hidhattoonni Taalibaan Paakistaan keessatti namoota 145 ajjeesan;132 barattoota
Akka gabaasa BBC tti, hidhattoonni Taalibaan ajjeechaa kana kan raawwatan mana barnootaa bulchiinsa raayyaa woraana biyyattii jala jiru kan naannoo Peshaawaaritti argamu tokko seenuudhaan. Akkuma mana barnootaa seenaniin hidhattoonni Taalibaan barattoota irratti dhukaasa wolirraa hincinne banan jechuun angawaan poolisii tokko dubbatee. Rukuttaa kanaan hanga ammaatti namoonni 126 lubbuu isaanii dhabuun beekameera; hedduun isaanii barattoota ta’uun mirkanaayeera. Laakkofsi barattoota du’anii fi madaayanii ammas hedduu dabaluu danda’a sodaa jedhutu jira.
Akka ibsa hospitaalli naannoo kennetti, hanga ammaatti kanniin madaayanii hospitaala seenan namoota 36, barsiistota 2 dabalatee. Yeroo dhukaasni baname kanatti barattoota 500 tu mana barnootaa san keessa ture. Kanniin du’a irraa hafan iggitamuuf iggitamuu dhabuu isaanii hanga ammaatti wonti beekame tokko hinjiru. Irra jireessi barattoota kanaa kanniin gola 1 – 10 barataniidha.
Dubbihimaan Taalibaan Muhaammad Kurasaniin Taalibaan itti gaafatamummaa kan fudhatu ta’uu ibseera, akka gabaasa AP tti. Kanniin rukuttaa kana raawwatanis hidhattoota Taalibaan 6 ajjeesanii ufworeeguuf ufqopheessani ta’uu isaas saba-himaaletti bilbilee himeera. Taalibaan tankaarfii kana fudhachuuf kan dirqameef tankaarfii mootummaan Taalibaan irratti fudhate haloo bayuuf akka ta’es ibseera, Muhaammad Kurasaniin.
Paakistaan keessatti naannoon Peshaawaar lafa Taalibaan yeroo dabre keessatti irra deddeebi’ee halellaa addaddaa keessatti fudhate ta’uun niyaadatama.
Oduu gara boodaa nudhaqqabe
Rukuttaa Taalibaaniin wolqabatee barattoonni 132 woreegamuun isaanii beekameera. Tankaarfii Taalibaan barattoota irratti fudhate kana irrattii Muummichi Ministera Paakistaan Nawaaz Shariif yoo dubbatau ‘dhiiga dhangala’e mataa mataan haloo nibaana,’ jedheera. Kanneen dhiigni isanii dhangala’e yaadachuufis sadrkaa biyyoolessaatti guyyaa gaddaa sadi akka labsamuuf deemu dubbateera. Akka BBC tti, seera shororkeessitoota du’aan adabus baasuuf akka murteessan ibseera.
Tankaarfii Taalibaan kana mormiin kallattii addunyaa hunda irraa isa mudataara. Gochi barattoota irratti, mana barnootaa keessatti fudhatame, ‘seera Islaamaatiin ala,’ jechuun gareen Taalibaan Afgaanistaani gocha Taalibaan Paakistaan balaaleffate.
Kanniin du’a jalaa miliqan, ‘hidhattoonni kutaa kutaa irra deemaati kan ajeessaa turan. Kanniin minjala jalatti dhokatan hunda osoo hinhafin. Kanniin madaayanii iyyaa turani irrattis hanga afaan wolitti qabtanitti itti dhukaasaa turan. Barsiistonni osoo lubbuun jiran gubatanis jiru,’ jechuun waan mana barnootaa san keessatti ta’aa ture himaniiru, jedha Reuters.
Hidhattoonni du’a barattootaaf sababa ta’an 7 turan. Isaan keessaa hangi tokko Afaan Arabaa kan dubbataa turan ta’uunis gabaafameera, gabaasni the New York Times mul’isa.
Previous articleIggitiin magaalaa Siidnii sa’aa 16 booda du’a nama 3 xumurame
Next articleNaayijeeriyaan miseensota raayyaa woraanaa 54 irratti adabbii du’aa murteessite